Nagarik News - देश दौडाहामा 'जिन्दगी रक्स'
बिहीबार १७ पुष, २०७१
फिल्मको कथावस्तु पनि यात्रामै केन्द्रित भएको कलाकारले बताए। आइतवार टोलीले पत्रकार सम्मेलन गरी फिल्मबारे जानकारी दिएको थियो। युवा पुस्तालाई लक्ष्य गरी निर्माण भएको जानकारी दिँदै टोलीले फिल्मको ट्रेलर र गीतको भिडियो देखाएको थियो। पुस १८ गते रिलिज हुने फिल्म देशभर करिब ५० वटा हलमा चल्ने कलाकार सोनाम पाख्रिनले बताए। पोखराको बाराही हलमा फिल्म लाग्नेछ।सोनामसहित सहनिर्माता सुजिता श्रेष्ठ, कलाकार तथा मुख्य सहायक निर्देशक विनोद मैनाली र ड्रेस डिजाइनर आल्या गिरीको टोली पोखरा आएको थियो। सुजिताका अनुसार काठमाडौँदेखि चितवन हुँदै पोखरा पुगेर टुंगिएको चारदिने यात्राबीच नै फिल्म घुमेको छ। निकेश खड्काको डेब्यू निर्देशन फिल्ममा सौरमराज तुलाधर, अकेशा विष्ट, सोनाम पाख्रिन, प्रकृति श्रेष्ठ, ऋचा शर्मा, मकन राईलगायत कलाकारले अभिनय गरेका छन्। हरि हुमागार्इंले छायांकन गरेको फिल्मलाई निशान घिमिरेले सम्पादन गरेका हुन्।
इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटीका प्रशिक्षक म्यानुअल पिलेग्रिनीले आर्सनलका खेलाडी एलेक्सिस सान्चेज इंग्लिस क्लबका उत्कृष्ट खेलाडी भएको दाबी गरेका छन्। पिलेग्रिनीले सिटीका सर्जियो अगुइरोभन्दा पनि सान्चेज उत्कृष्ट भएको बताए। अगुइरोले घाइते...
सेतो पर्दा : नामै अशुद्ध !
फिल्मको बारेमा दर्शकलाई पहिलो प्रभाव पार्ने नामले हो। विडम्बना, धेरैजसो नेपाली फिल्मकर्मी आफ्नो फिल्मको नामसमेत शुद्ध लेख्दैनन्। नाममै गल्ती गर्नेले फिल्म गतिलो बनाउलान् भन्ने कसरी विश्वास गर्ने ?
म साहित्यको प्राइमरी विद्यार्थी : दीपशिखा
दीपशिखा युवा कवि तथा उपन्यासकार हुन्। राजनीति तथा प्रतिबद्ध पत्रकारितामा समेत आफ्नो परिचय बनाइसकेका उनको हालै पहिलो उपन्यास 'रात फुलेको याम' बजारमा आएको छ। नयाँ उपन्यास र उपन्यास लेखनको सेरोफेरोमा...
पढे पो जानिन्छ
नेपाली फिल्मकी एक अभिनेत्रीले केही समयअघि काठमाडौँको ओस्कार फिल्म कलेजका विद्यार्थीहरूलाई भनिछन्, 'अभिनय सिकिरहनु पर्ने विधा नै होइन। खोइ मैले त सिकेको छैन।' जुन कलेजमा अभिनय विषयमै स्नातक तहको पढाइ...